Ntụziaka e nyere onye nduzi. Abụ ọma Devid. 11 Agbabawo m n’ime Jehova.+ Olee ihe mere unu ji na-asị mkpụrụ obi m: “Felaanụ n’ugwu unu dị ka nnụnụ!+ 2 N’ihi na, lee! ndị ajọ omume na-ekwe ụta,+ Ha na-etinye akụ́ ha n’eriri ụta, Ka ha nọrọ n’ọchịchịrị gbaa ya ndị obi ha ziri ezi.+ 3 Mgbe e bibiri ntọala,+ Gịnị ka onye ọ bụla bụ́ onye ezi omume ga-eme?” 4 Jehova nọ n’ụlọ nsọ ya.+ Jehova—n’eluigwe ka ocheeze ya dị.+ Anya ya na-ahụ, anya ya nke na-enwu gbaa na-enyocha+ ụmụ mmadụ. 5 Jehova na-enyocha ma onye ezi omume ma onye ajọ omume,+ Mkpụrụ obi ya kpọrọ onye ọ bụla nke hụrụ ime ihe ike n’anya asị.+ 6 Ọ ga-eme ka ọnyà ma ndị ajọ omume, meekwa ka ọkụ na sọlfọ zokwasị ha dị ka mmiri,+ Meekwa ka ifufe nke na-amịkpọ mmadụ bụrụ iko ha ga-aṅụ.+ 7 N’ihi na Jehova bụ onye ezi omume;+ ọ hụrụ ezi omume n’anya.+ Ọ bụ ndị ziri ezi ga-ahụ ihu ya.+